ओपन क्याम्पस क्यू ए ए (3/3) | विदेशी विद्यार्थीहरु को लागि ओपन क्याम्पस मार्गदर्शिका | アクセス日本留学 - जापान को विदेश मा विदेशों को अध्ययन को लागि अध्ययन (अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थीहरु)
ओपन क्याम्पस क्यू ए ए
हामी प्रायः भेला भएका प्रश्नहरू र खुल्ला क्याम्पसमा जवाफ लिनुभयो।
यदि तपाईंसँग केहि छ भने तपाईंले खुला क्याम्पस वा प्रवेश परीक्षामा भाग लिँदा बुझ्न सक्नुहुन्न, कृपया यो पृष्ठ पहिलो पटक पढ्नुहोस्। यदि तपाईंसँग अझै पनि केहि छ भने तपाईं बुझ्नुभएन भने, स्कूललाई सीधा सोधौं।
(एक स्कूल को अग्रिम आरक्षण जहां आवश्यक छ) मा मैले आरक्षण गरे तर अचानक बाहिर गयो।
म खुल्ला क्याम्पसमा जान्छु कस्तो प्रकारको लुगाहरू जान्छु?
क्यापसस भ्रमणहरू र अन्य कार्यक्रमहरू जुन विद्यालय वरिपरि चल्न सक्छन् उपलब्ध हुनका लागि सजिलो-देखिने साटो र लुगाहरू अझ राम्रो छ। साथै, गर्मी को छुट्टी को समयमा धेरै स्कूलहरु मा खुल को परिसर मा फोकस गर्छन, यो राम्रो छ कि छाला अत्यधिक मात्रा मा बावजूद भइ रहेको छ किनकी यो गर्म छ। त्यस्ता समस्याहरू छन् जहाँ एअर कंडीशनर कोठामा प्रभावकारी छ, त्यसैले यो उपयोगी हुन्छ यदि तपाइँ लुगा जेकेट जस्तै शरीरको तापमान समायोजन गर्नुहुने लुगा लगाउँछन्।
① बल्ला पेन र पेंसिल प्रश्नावली भरेर र टिप्पणीहरू लिन
② नक्शा जाँच गर्न स्मार्टफोन र फोटो र मेमोहरू लिनुहोस्
③ तपाईले चाँडै चिन्तित हुनुभएको स्मारकको लागि सानो नोटप्याड
[चीजहरू तपाईंको साथ लिन सजिलो छ]
④ तापमान समायोजन गर्न सजिलो, पतली बाह्ररी
⑤ A4 आकार ब्रोशर र मुद्रण प्रविष्टि, ठूलो थलो
त्यहाँ जाने भन्दा अघि केहि राम्रो छ?
चलो यात्राको माध्यम र स्टेसनबाट नक्सा पहिले अग्रिम विद्यालय जाँच गरौं। त्यहाँ एउटी स्टेसनमा अन्य विश्वविद्यालयहरू र व्यवसायिक स्कूल हुन सक्छ, त्यसैले कृपया गल्ती गर्नुहुन्न। यो दिन स्मार्टफोन जाँच गर्न सजिलो छ, ताकि तपाईं दिनको तुरुन्तै परीक्षण पृष्ठ खोल्न सक्नुहुनेछ।
साथै, फिर्ता स्कूल ब्रोशर र आधिकारिक वेबसाइटहरू पढ्नुहोस्। तपाईले कुन कुरा सँगै बुझ्न सक्नुभएन भने तपाईले कुन कुरालाई बुझ्न सक्नु भएकोमा संक्षेप गर्न सक्नुहुनेछ, व्यक्तिगत सल्लाह, आदिबाट थप विशिष्ट प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, र बिन्दुहरूलाई खुल्ला परिसरमा जाँच गर्न स्पष्ट गर्नुहोस्। आफैको लागि, हामी विद्यालयको छनौट गर्ने बेलामा कस्तो परिस्थिति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारे सोच्नुहोस्।
「POINT2खुला परिसर सामेल भएपछिकृपया "जाँच गर्नुहोस्" को आठ चेक पोष्टहरू हेर्नुहोस्।
यसको वाहेक, यो शौचालय, कैफेरियासिया, पुस्तकालयहरू, ब्रेक रिक्त स्थानहरू, दैनिक रोजगारीको आकार र लिटरहरूको ध्यान सावधानीपूर्वक हेर्नको लागि राम्रो विचार हो। यदि तपाईं तस्विर लिन सक्नुहुनेछ भने, उपयोगी हुन्छ जब तपाईले तस्बिरहरू पनि लिनुहुन्छ भने पछि पछि।
म ढिलो हुन जाँदैछु किनभने मैले आरक्षण गरेको छु, मैले के गर्नु पर्छ?
कृपया खुल्ला क्याम्पस सहभागीको लागि आवेदक हुनुको बारेमा मलाई बताउनुहोस्, ढिलाइ हुने सम्भावना कस्तो छ, यो कति ढिलो हुनेछ, र के गर्न सोध्नुहोस्। त्यस्ता मुद्दाहरू छन् जहाँ मध्यबाट साझेदारी गर्न सकिन्छ, वा तपाइँ अर्को कार्यक्रम वा अन्य कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ।
सबैभन्दा पहिला, तपाईंले के गर्न चाहनुहुन्छ के बारे बोल्नुहुन्छ र चाहानुहुन्छ स्कूल छनौट गर्न के तपाईलाई चाहानुहुन्छ भने, यो स्कूलले यो गर्न सक्दछ भने गरौं। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, विस्तार गर्न व्याख्या गर्नुहोस् कि तपाईं कसरी एस्पेस गर्न सक्नुहुन्छ र प्रश्न सोध्न वा मलाई थाहा छ।
मैले विद्यालय जान चाहन्छु, खुल्ला क्याम्पसमा धेरै टाढा छ, मैले के गर्नु पर्छ?
यद्यपि यदि तपाईं खुला क्याम्पसमा जानुहुन्छ भने तपाईले परीक्षा लिन सक्नुहुनेछ त्यसैले तपाई जानुपर्छ।
यद्यपि, खुल्ला परिसर जहाँ विद्यालयको वातावरण महसुस हुन्छ स्कूलको छनोटको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि यसले मद्दत गर्दैन भने, स्कूल आधिकारिक वेबसाइटलाई हेर्ने अनुमति दिन्छ। अधिकतर विद्यालयहरूले विद्यालय परिचय चलचित्र, ब्लगहरू, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक आदिमा ताजा जानकारी र घटनाहरू हेर्न सक्छन्।
म तालिका द्वारा खुल्ला परिसरमा जान सक्दैन।
के म खुल्ला परिसरमा जाने को लागी परीक्षा लिन सक्छु?
के यो विनाशकारी हुनेछ?
खुल्ला क्याम्पसहरूले धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ जुन ब्रोशरहरू र वेबसाइटहरू हेर्दा सजिलै सुन्न सक्दैनन्। यसको अतिरिक्त, धेरै स्कूलहरु को खुल परिसर मा भाग ले, तपाईं जोरदार चाहते हो जो मापदंड तपाईंको इच्छुक स्कूल को चयन गर्न मा स्पष्ट हुनेछ, यसैले धेरै परिसर को खुली परिसर मा जाइए। यहां सम्म कि स्कूलहरु जहाँ तपाईं जान्दछन् कि परीक्षा लिन वा छैन कि छैन।
"アクセス日本留学" जापानी विश्वविद्यालय · व्यवसायिक स्कूल को खुला क्याम्पस जानकारीको सारांशित गरियो जसले अन्तरक्रियात्मक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई स्वीकार्छ। आउनुहोस् कि कस्तो प्रकारको कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ र जब यो आयोजित हुन र वास्तवमा स्कूल जान्छ।